अधुरै रह्यो छैटौं एल्बमको सपना- कला - कान्तिपुर समाचार
अधुरै रह्यो छैटौं एल्बमको सपना
७३ वर्षको उमेरमा इलाहाबाद प्रयाग संगीत समितिबाट प्रभाकर उत्तीर्ण गरेका थापा जीवनको उत्तरार्द्धमा संगीत क्षेत्रका युवाजत्तिकै सक्रिय थिए ।
मंसिर २३, २०७७ सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — लकडाउनपछि बजारमा सामान्य चहलपहल देखिए पनि कोरोनाको जोखिम हटेको थिएन । बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताइरहेकै बेला धेरैजसो आफ्नै निवासमा निष्क्रिय नै थिए भने यता जगतमर्दन थापा झनै सक्रिय थिए ।
८५ वर्षीय वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार थापालाई आफ्नो शरीरभन्दा नेपाली गीतसंगीतको प्रेम थियो र त उनी छैटौं एल्बमको तयारीकै लागि गीतहरू रेकर्डिङमा व्यस्त हुँदै थिए ।
एकातिर माघ २७ गते जन्मदिन नजिकिँदै गर्दा उनलाई एल्बम सार्वजनिकको चटारो थियो भने अर्कातिर संगीतलाई पनि महाव्याधिसँग जुधेर उध्याउने उनको प्रयास जारी थियो । महामारीबाट संगीतलाई थला बसेको देख्न नचाहने उनै सर्जक थापा कोरोनालाई पछाडि पारेर अगाडि बढ्दै थिए । कोरोना संक्रमणलाई त उनले जितेरै छोडे तर यसको प्रभावसँग भने लड्न सकेनन् । अन्ततः सोमबार बिहान मंसिर महिनाको न्यानो घामको किरण चढ्दै गर्दा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका अमूल्य रत्न थापा भने सधैंका निम्ति अस्ताए । उनको छैटौं एल्बमको सपना अधुरै रह्यो ।
थापाथलीको नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा सोमबार उनले अन्तिम सास लिएका थिए । कोरोना संक्रमणपश्चात् लगभग एक महिनादेखि उनी अस्पतालमा उपचारत थिए । झन्डै डेढ हप्ताअघि कोरोनामुक्त भए पनि छातीमा समस्या देखिएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो ।
बाबुको जागिरे जीवनकै क्रममा सप्तरीको बरमझियामा जन्मेका थापाले २०१३ सालबाट रेडियो नेपालबाट आफ्नो सांगीतिक तथा साहित्यिक यात्रा सुरु गरेका थिए । तीनताक रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने ‘छात्र’ र ‘नारी’ कार्यक्रममा थापाले गीत, कविता तथा कथा नियमित वाचन गर्थे । अध्ययनसँगै साहित्य र संगीतमा निरन्तर लागेका उनले २०१८ सालमा कोलकाताबाट हिज मास्टर्स भ्वाइसमा ‘माया लुकाई लुक्दैन’ बोलको पहिलो गीत रेकर्ड गराएका थिए । हिन्दी गीतको दबदबा रहेको त्यो समयमा नेपाली श्रोतालाई थापाले आफ्नो भाषाका गीतको स्वाद चखाएर संगीतको जग बलियो बनाउने काम गरेका थिए । २०२१ सालमा उनको कथासंग्रह ‘पलाँसको फूल’ प्रकाशित भएको थियो ।
जगतमर्दनलाई नेपाली संगीत क्षेत्रमा एक सशक्त र प्रतिभावान् गायक तथा संगीतकारका रूपमा सधैं सम्झना गरिने गीतकार राजेन्द्र थापाले बताए । २०१८/१९ सालपछिका चर्चित ‘भन लौ नढाँटी,’ र ‘आशाको दियो बालेर’ जस्ता जगतमर्दनका गीत उनले स्मरण गरे । ‘संगीत क्षेत्र मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि उनीजस्ता भद्र व्यक्तित्वको अभाव सदा खड्किनेछ,’ उनले भने । जगतमर्दनले सञ्चय कोषमा अधिकृत, कृषि चुन उद्योगमा महाप्रबन्धक, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, अर्थ मन्त्रालयमा सहायक सचिव, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा उपसचिवजस्ता जिम्मेवारी सम्हालेर तीन दशकभन्दा लामो सरकारी सेवा गरेका थिए ।
उनको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले संगीतका अलावा कर्म क्षेत्रमा अडिग र अटल भएर लाग्ने एउटा कर्मठ, मिलनसार र निष्ठावान् व्यक्तित्वलाई मुलुकले गुमाएको बताए । सञ्चय कोषमा जागिरकै क्रममा आधा दशकभन्दा लामो समय थापासँगै बिताएका श्रेष्ठले भने, ‘उहाँको निधनले पुरानो समयको असाध्यै याद आयो । सञ्चय कोषमा हामी सँगै काम गर्दा उहाँ संगीतको कुरासँगै गाउनु पनि हुन्थ्यो र म चाहिँ क्यारिकेचर गर्थें । मनोरञ्जनका लागि उहाँलगायत हाम्रो छुट्टै टिम नै थियो । अफिसको पिकनिकमा समेत विभिन्न समितिहरू बनाउँदा उहाँ र मलगायतकालाई मनोरञ्जन समितिमा राख्ने गरिन्थ्यो ।’ नेपाली संगीतलाई माया गर्ने र सबैलाई रिझाउन सक्ने इमानदार व्यक्तित्वका रूपमा उनले थापालाई सम्झे ।
५० को दशकमा जागिरे जीवनको अवकाशपछि थापा पुनः सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भएका थिए । यसै क्रममा उनले ‘४० वर्षअघि र ४० वर्षपछि’, ‘मनको शान्ति’, ‘माया लुकाई लुक्दैन’, ‘म पतझड तिमी मधुमास’, ‘म मक्किएको धुरी खाँबो’ जस्ता एल्बम ल्याए । उनको आत्मवृत्तान्त ‘कर्मशील जीवनयात्रा’ गत वर्ष प्रकाशित भएको थियो ।
उनले ७३ वर्षको भएपछि भारतको इलाहावाद प्रयाग संगीत समितिबाट प्रथम श्रेणीमा प्रभाकर (बी म्युज) उत्तीर्ण गरेका थिए । ८४ औं जन्मोत्सवका अवसरमा पाँचौं एल्बम ‘म मक्किएको धुरी खाँबो’ सार्वजनिक गरेका थापालाई आफू मक्किँदै गएको आभास नै थिएन । गत वर्ष पाँचौं एल्बमकै कुराकानीमा क्रममा उनले निकै साहससाथ भनेका थिए, ‘शरीरमा सासले साथ दिएसम्म म गाइरहन्छु । म त ९१ वर्षमा पनि गीत गाउने र एल्बम निकाल्ने हो ।’ उनले लोचन भट्टराई, शर्मिला बर्देवा, अञ्जु पन्त, मिलन अमात्य, जुनु गौतम र भारतीय गायिका उषा मंगेशकरदेखि लगायतसँग युगल गीत गाएका छन् ।
अन्तिम पलसम्म पनि थापाले आफूलाई अत्यन्तै सक्रिय बनाएको गीतकार दिनेश अधिकारीले स्मरण गरे । ‘उहाँले ८५ औं जन्मदिनमा सार्वजनिक गर्ने तय गरिएको छैटौं एल्बमका लागि मलाई गीत लेखिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँ अत्यन्तै ने ऊर्जाशील हुनुहुन्थो । संगीत क्षेत्रले एकजना अभिभावक गुमाएको छ ।’
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७७ ०९:३५
नेपाली राजनीतिका पाँचौं बिटल्स
यावत् सञ्चारसामग्रीमा निरन्तर असन्तुलित कसरत भइरहेको देखिन्छ- महेन्द्रको व्यक्तित्व उचाल्नका निम्ति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई खसाल्ने वा कोइरालालाई उचाल्नका निम्ति महेन्द्रको घोर निन्दा गर्ने । त्यसरी गन्तव्यमा कहिल्यै पुगिँदैन ।
मंसिर २३, २०७७ सौरभ
शीर्षकको परिभाषाजोन लेनन, रिंगोस्टार, पल म्याककार्टनी र जर्ज ह्यारिसनलाई सुलभ संगीत (पप म्युजिक) का चार बिटल्स भनेर पश्चिममा चिनिन्छ । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । पाँचौं बिटल्स पेट वेस्ट मानिन्छन् । यद्यपि पाँचौं बिटल्स मानिने अरूहरू पनि छन्, जसको नाम बिटल्स समाजमा प्रायः लिइँदैन ।
यहाँ पाँचौं बिटल्स भनिएको आजको राजनीतिक सन्दर्भमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई हो । लेखको मध्यतिर ती चार बिटल्सको प्रसंग लिइए पनि प्रारम्भ र पुछारमा केही अहं सन्दर्भहरू नउठाई लेखको मूलमर्म बुझिने छैन ।
१ पुस २०१७ को राजनीतिक घटना विधिको शासनविपरीत कदम थियो भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन तर त्यसयता यावत् सञ्चारसामग्रीमा निरन्तर असन्तुलित कसरत भइरहेको देखिन्छ– महेन्द्रको व्यक्तित्व उचाल्नका निम्ति विश्वेश्वर कोइरालालाई खसाल्ने वा कोइरालालाई उचाल्नका निम्ति महेन्द्रको घोर निन्दा गर्ने । त्यसरी गन्तव्यमा कहिल्यै पुगिँदैन । र, यो लेख त्यो सन्तुलन मिलाउनका निम्ति पनि होइन, केही स्वयम्भू पाठकहरूलाई भ्रम नहोस् ।
सुवर्णशमशेर राणा वा सूर्यप्रसाद उपाध्याय कुनै एक प्रधानमन्त्री भइदिएका भए १ पुस २०१७ आउँथ्यो ? भन्ने प्रश्न कसैले पनि गरेको देखिँदैन, देखिएको छैन । गणितशास्त्रको अध्ययन, अध्यापन भएको युग बित्यो । त्यसअन्तर्गतको सम्भाव्यताको सिद्धान्त सैनिक विज्ञानमा समेत लागू भएको अलेक्जेन्डरका बेलादेखिकै हो । अर्थात् यो २३ सय वर्षपछि पनि त्यो सिद्धान्त हेरी हाम्रा राजनीतिक मोडहरूको आकलन गरिएन ।
सन् १९६२ को चीन–इन्डिया युद्धका बेला कोइराला सरकार रहिरहेको भए उसले कस्तो नीति लिने थियो, तटस्थताको वा इन्डिया समर्थनको ? भन्ने प्रश्नले पनि २०१७ लाई एक हदसम्म स्पष्ट पार्छ । कोइराला सरकारले ‘इन्डिया समर्थन’ को नीति लिने थियो— उनका विरोधीहरूले सहजै भन्नेछन् । तर, चीनसँग सीमा जोडिएको देशका प्रधानमन्त्री त्यस हदसम्म निश्चय नै जाने थिएनन् । र, नेपाल तटस्थताकै नीति लिन बाध्य हुन्थ्यो– अबुझले पनि भन्न सक्ने कुरा हो ।
तर, इन्डियामा बितेको जीवन र भएको सम्पर्कले उनलाई तटस्थ रहन भने दिने थिएन । परिणतिस्वरूप उत्तरी सीमामा चीनले गर्ने थिचोमिचो झेल्न उनले चीनसँगको कूटनीतिक परिधिलाई व्यापक रूपमा बढाउनुपर्ने हुन जान्थ्यो । यसले गर्दा इन्डियाका निम्ति उनी ‘अविश्वसनीय पात्र’ हुन जान्थे । विधिको शासनले स्पष्ट भन्छ– मध्यावधि चुनाव एक बाध्यता बन्थ्यो । धेरै सम्भावना छ– गोर्खा परिषद्लाई अरूसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका मिल्थ्यो । मृगेन्द्रशमशेर राणा प्रधानमन्त्री बन्थे । युग उल्टिन्थ्यो ।
यद्यपि माथिको हरफ संस्कृतको ‘सोम शर्माको कथा’ को अर्को आवृत्तिजस्तै लाग्नेछ । तर, पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट संविधानहरूको पतनपछि पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनाएको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । अर्थात् २०१७ नआएको भए पनि तत्कालीन कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमतकै बलमा पाँच वर्ष सरकारमा बहाल रहन सक्ने अवस्था थियो ? यो प्रश्न पनि कसैले आफैंलाई गरेको देखिँदैन ।
२०४६ पछिको पहिलो आम निर्वाचनपछि सत्तासीन भएको गिरिजा सरकारको चार वर्ष पुग्दा–नपुग्दै माओवादको उदय र राजनीतिक रेलका बोगीहरू लिकबाहिर पुगेको देख्दा पनि सत्ता कांग्रेसलाई फाप्दो रहेनछ, ऊ प्रतिपक्षमै बस्न मात्रै लायक रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।
राजाको र मेरो घाँटी जोडिएको छ— २०३६ सालको जनमतसंग्रहको पूर्वसन्ध्यामा विश्वेश्वर कोइरालाले खुलामञ्चमा भने । (पंक्तिकारका लागि भने यो अनौठो घटना थियो । उनी कति बेलादेखि भाषण गरिरहेका थिए, थाहा भएन । पंक्तिकार कुनै भाषण सुन्न खुलामञ्चमा यसअघि गएको पनि थिएन । तर, झट्ट पुग्दा यही वाक्य कानमा पर्‍यो र आफूलाई नै प्रजातन्त्रको पर्यायवाची बनाएको अहं पंक्तिकारले पचाउन सकेन । त्यसपछि ऊ त्यो परिसरबाटै बाहिर निस्क्यो । फेरि अहिलेसम्म त्यहाँ कसैको भाषण सुन्न गएको पनि छैन ।)
तर, आज हेर्दा कांग्रेसको जहडी रहस्य विश्वेश्वर कोइरालाले जति कुनै कांग्रेस सदस्यले बुझेकै रहेनछ भन्ने थाहा हुन्छ । राजतन्त्रसँग कांग्रेसको त्यही सम्बन्ध थियो, जुन जंगली धानसँगै घरैया धान प्रजातिको हुन्छ । जंगली धान भएन भने घरैया खेती प्रजाति पनि नरहने तर्क जसरी कृषिविज्ञहरू अगाडि सार्छन् । अर्थात् १ पुस २०१७ महेन्द्रले कांग्रेसलाई दिएको लाज ढाक्ने टालो थियो, हेर्दै गयो भने । एकाएक पदबाटै बरखास्त गरिँदा, विश्वेश्वर कोइरालालाई जीवनको अन्तिम क्षणसम्म मिलेको महान् प्रजातन्त्रवादी र दूरदर्शी भन्ने ‘शंकाको लाभ’ थियो त्यो । अन्यथा २०२० सम्ममा उनको छवि त्यही बनिसक्ने थियो, २०५२ सम्ममा पुग्दा गिरिजा कोइरालाको जे र जस्तो भयानक अप्रिय छवि बन्यो । वा गिरिजाले ‘सिंह’ उपाधि दिएका पुष्पकमल दाहालको अहिले जे छवि बनेको छ । (एमालेले पनि बुझे हुन्छ, दासढुंगा घटनाले मदन भण्डारीलाई पनि शंकाको लाभ दिइरहेको छ ।)
राजतन्त्र रहिरहनु कांग्रेसका लागि आफूजत्तिको उदार प्रजातन्त्रवादी अरू कोही नरहेको विज्ञापन गरिरहने एउटा सदाबहार ‘आइम्याक्स’ हुने थियो । प्रजातन्त्रको शत्रुका रूपमा उसले त्यो शक्तिलाई देखाइरहन पाउँथ्यो । तर, २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानपश्चात् देशको राज्यसत्तामा उदाएको ‘लिबरल लेफ्ट’ शक्ति सञ्चयमा तल्लीन रहे पनि कांग्रेसका तुलनामा भने दस गुणाले अस्तव्यस्ततावादी देखिन पुगेको छ । र, यसमाथि जतिसुकै भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि, यो परिवारविशेषको पार्टी हो भन्ने छविचाहिँ छैन ।
जुनसुकै इलाका र परिवारको होस्, आफ्नो शक्ति–सामर्थ्य लगाउन सक्ने व्यक्तिले पद, पैसा र प्रतिष्ठा पाएकै छ । यसले गर्दा राजतन्त्र नरहनेबित्तिकै सबै होइनन्, परिवारविशेषको होलसेल पसल बन्द हुन्छ भन्ने कुरा दाजु विश्वेश्वरले जति बुझे त्यति भाइ गिरिजाले बुझिदिएनन् । यो बुझेरै हुनुपर्छ– वामपन्थीहरूसँग कुनै हालतमा मिल्नु हुँदैन, बरु दरबारसँगै मिल्नुपर्छ भन्ने उनको नीति २०३८ मा उनी नबित्दासम्म रह्यो ।
पहिलो : २०३७ मा जब सूर्यबहादुर थापाले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गरे, बहुदल त्यति बेलै आयो । थापा, सूर्यप्रसाद उपाध्यायका राजनीतिक पुत्र हुन् । सूर्यप्रसाद उपाध्यायको आँखाबाट झरेको दुई थोपा आँसु मेरा खुट्टामा परे– विश्वेश्वर कोइरालाले कतै व्यक्त गरे । तर, सूर्यबहादुर थापाले कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ जे भने त्यो उपाध्यायको बोली हो । यद्यपि उपाध्याय यति अग्ला र मोटा थिए, उनको आँसु झरेको भए पनि उनकै पेटमाथि झर्थ्यो, कोइरालाको ख्ट्टुामा होइन ।
इतिहास विचित्र हुन्छ । कुनै पनि बेला शाहलाई हटाएर गद्दीमा बस्न जंगबहादुर राणा सक्षम थिए, धरमर नै थियो तत्कालीन शाहहरूलाई । नातिपछि, छोरा पनि बितेपछि पनाति पृथ्वीवीरविक्रम राजा भएको हेरेर, आफ्नो वंशसत्ताको ग्यारेन्टी देखेको दुई महिनापछि मात्र राजेन्द्रविक्रम शाहको प्राण सजिलै गएको थियो ।
विश्वेश्वर कोइराला बितेको र बहुदल औपचारिक रूपमै स्थापना भएको हेरेर मात्रै बिते उपाध्याय । २०१५ को चुनावमा दुई ठाउँबाट हराएर प्रधानमन्त्री हुनबाट कोइरालाले रोकेको बदला आखिर उपाध्यायले लिएरै छाडे । अन्तिम दौडमा विजेता उपाध्याय नै भए, कोइराला होइन । उनको लासमाथि कांग्रेसको चारतारे झन्डा गणेशमानसिंहले जे ओढाए, मानौं त्यो अनजानमै मूल विजेताप्रति गरिएको सम्मान थियो । भलै एक अनौठोपनजस्तो देखियोस् ।
दोस्रो : १ पुस २०१७ पछि कम्युनिस्टहरूले मिलेर आन्दोलनमा जाऔं धेरैपल्ट भने तर २०१५ को चुनावमा चार सिट मात्रै ल्याएका कम्युनिस्टहरूलाई गनेनन् कोइरालाले । आन्दोलन सफल भएछ भने पनि तिनलाई किन श्रेय दिने ? भन्नेमै लागे उनी । २०३६ को जनमतसंग्रहको परिणामलाई उनले स्विकार्नुको कारण हारेर रन्थनिएको पञ्चायतले कम्युनिस्टहरूलाई नै सत्तामा पुर्‍याउन बेपत्तासँग भोट हाल्छ भनेर डराउनु रहेको देखिन्छ । तर, तीस वर्षपछि कम्युनिस्टहरूको साझेदारीमा २०४६ मा संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो र त्यसको अर्को तीस वर्षमा उनीहरू दुईतिहाइ बहुमतका साथ सत्तासीन भए । २०१५ मा कांग्रेसको स्थान संसद्मा जे थियो, ६० वर्षको संघर्षले उनीहरूलाई त्यही स्थान दिलायो । पुष्पलालको नाममा कुनै पक्षको विवाद रहेन र छैन । कोइरालाजति बौद्धिक होइनन् पुष्पलाल, कम्युनिस्टहरूले दाबी गर्नेजस्तो । तर, आफूसँग मिल्न नचाहने कोइरालालाई पुष्पलालले अन्ततः जितेरै छाडे ।
तेस्रो : बौद्धिक होइनन् टंकप्रसाद आचार्य, कोइरालाजस्तो । २०२५ को गोरखापत्रमा छापिएको उनको ‘प्रेयसी’ शीर्षक कविताबाट यो थाहा हुन्छ । सुन्दरीजल जेलबाट कोइरालालाई छुट्ने/छुटाउने आन्तरिक योजनाहरू चलेको त्यो वर्ष एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले शृंगाररसमा त्यस्तो कविता लेख्नु कति समयोचित र चेतनापरक थियो भन्ने प्रश्न आज पनि उठ्छ । राजनीतिक सुझबुझ भएका पनि होइनन् । यो कुरा शम्भुराम श्रेष्ठलाई पार्टी सुम्पेर प्रजापरिषद् सिध्याए आचार्यले भन्दै दमन तुलाधरले लेखेको विवरणबाट पनि थाहा हुन्छ । तर, सत्ता कब्जाका निम्ति सके मार्ने, नसके मर्ने नीति आचार्यले जे अख्तियार गरे, त्यही नीति लिएर माओवाद अन्ततः उदायो र सत्तासीन हुन पुग्यो । आजसम्मको राजनीतिमा टंकप्रसाद आचार्यजस्तो महसुर कोही देखिएको पनि छैन । तीन सहिद दिएको थियो आचार्यको पार्टीले, छाती थापेरै मरेका । जुन स्थानमा कांग्रेसका यज्ञबहादुर थापा मात्र पुग्छन् । मरेर र मारेर आज सत्तामा माओवादी पुगे पनि, नीति टंकप्रसाद आचार्यको हो र उनले पनि दुईपल्ट सशस्त्र संघर्षको बिगुल फुकेर पनि अन्ततः हारेका कोइरालालाई उछिनेका छन् ।
चौथो : केशरजंग रायमाझी सर्वाधिक निन्दित छन् कम्युनिस्ट वृत्तमा । तर, एक लेखकले लेखेको एक हरफको यो सार विचित्रको छ– अफगानिस्तानमा तत्कालीन सोभियत संघले हस्तक्षेप गरेपछि त्यसको समर्थन नगरेको कारण रायमाझीलाई राजापरस्त भनेर गिराउँदै जाने काम एक धमिरोले गर्‍यो, त्यो हो महेशमणि दीक्षित । (‘लप्टनको होटल,’ अरविन्द रिमाल)
सिक्किम विलयनविरुद्ध बोलेकोमा कोइराला भारत छोड्न बाध्य भएर २०३३ मा नेपाल भित्रिए । उनको त्यसपछि राष्ट्रवादी छवि उचालियो । तर, त्यही स्थान रायमाझीले पाएनन्, अफगानिस्तानमा हस्तक्षेपको समर्थन नगर्दा पनि; नेपाली समाजको पूर्वाग्रही विडम्बना भनौं । तर, आज नेपालमा अमेरिकीहरूको बढ्दै गइरहेको दबदबाले भन्छ– रायमाझीले उति बेलै विश्वको शक्ति सन्तुलन र त्यसबाट नेपालमा पर्ने असरलाई आकलन गरिसकेका थिए । यसैले उनी सोभियत खेमाको कम्युनिस्ट भनिँदाभनिँदै पनि त्यो लाइनमा गएनन् ।
वीरेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाहको झुकाव महेन्द्रको विपरीत पश्चिम र विशेष गरी अमेरिका रहे पनि यति बेला रायमाझीकै बुझाइले नेपालमा माओवादीहरू सत्तासीन भएका पनि हुन् र नयाँ संविधान आएको पनि हो । विश्वमामिलाको बुझाइमा समेत कोइराला पछाडि रहेछन् । उनी आज पाँचौं स्थानमा देखिन्छन् राजनीतिज्ञहरूबीच । भोलि त्यो स्थानका निम्ति पनि को खडा हुने हो, भन्न सकिन्न । यसैले पाँचौं बिटल्स मानिने अरू नामहरू पनि छन् भनेको सुरुमै ।
तुलसी गिरीले विश्वेश्वर कोइरालालाई धोका दिए भनेर निरन्तर लेखिरहिएको पाइन्छ । तर, गिरीको प्रखर ज्ञान र जीवनशैलीले उनलाई राजनीतिज्ञ भन्न मिल्दैन । जस्तो : इन्डियामा सुब्रमन्यम स्वामीलाई राजनीतिज्ञ ठान्नु गल्ती हुन्छ । यो यथार्थलाई हेरियो भने बालचन्द्र शर्माले किन कांग्रेस परित्याग गरे ?, गणेशराज शर्मा नाताका कारण पार्टीमा उक्लिन सजिलो हुँदाहुँदै पनि किन कांग्रेसका नेता हुन गएनन् ? भन्ने पनि बुझिन्छ ।
एमओ मथाई र महम्मद युनुस पार्टी प्रमुखका सहायक हुँदाहुँदै पार्टी म्यानेजरजस्तै हुन पुगे । तर, ती कहिल्यै इन्डियाका प्रधानमन्त्री भएनन् । त्यसको विपरीत २०४६ पछि कम्तीमा तीन जना पार्टी म्यानेजरहरू नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । अर्थात् राजनीतिक वृत्तभित्रै पनि राजनीतिज्ञ, पार्टी म्यानेजर, ठूलो नाम भएको वामदेवजस्तो तर चरित्रले कार्यकर्ता मात्र, पावर ब्रोकर र बौद्धिकहरू कहाँनिर मिसिन पुगेका हुन्छन् र कहाँ फरक ? छुट्याउन नसक्ने समाजले माथि भनिएको कुराको अर्थ बुझ्ने छैनन् । तर, गिरीले भने घुमाउरो र सोझै पारामा पनि बारम्बार उनी किन कोइराला नेतृत्वभित्र रहन सकेनन् भनेका छन् ।
सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि त्यसको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न पश्चिममा ‘समाजवाद’ लाई अघि लगाइयो र उचालियो । समाजवादको परिभाषा त्यसयता आफूखुसी हुँदै आयो र भइरहेको छ । तर समाजवादीको खोलमा कम्युनिस्ट पल्टेकाहरू पश्चिमा आँखाबाट उम्कन सकेनन् । सबैभन्दा नराम्रो परिणति सन् १९७३ मा चिलीमा भएको साल्भाडोर एलेन्डेको हत्या हो । तर, कम्युनिस्ट नै भइहाल्नबाट चाहिँ पन्छेकाहरूले पुरस्कार पनि पाएका छन् । सबैभन्दा सटीक उदाहरण पोर्चुगलमा म्यारियो सोआरेसको पुनर्बहाली हो ।
अर्थात् कोइरालाको समाजवादले संसदीय परिपाटीको हिमायती र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर भनेर आफ्नो परिचयको निर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त थिएन, शीतयुद्ध सुरु भइसकेको त्यो विश्वमा । भूमिसुधारमाथिको एक विवाद यसका निम्ति पर्याप्त दृष्टान्त हुनेछ । भूमिसुधार कांग्रेसको आइडिया थियो, जसलाई लोकप्रिय हुन महेन्द्रले चोरे भनेर सबै किसिमका मानिसहरू भन्छन् । तर, तराईको जंगलमा हात्तीका हौदाहरू आमनेसामने भएको अवस्थामा हरिहर गौतम २२ हजार बिघाको मालिक भएको थाहा पाएपछि महेन्द्रले भूमिसुधार लागू गरे भनेर एक ठाउँ मोदनाथ प्रश्रितले लेखेका छन् । यद्यपि सानो त्रुटि छ त्यसमा, गौतम पश्चिम नेपालको चौथो नम्बरको जमिनदार थिए, जसका हातमा ३५ हजार बिघा थियो ।
अर्थात् आर्थिक हैसियतले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी हुन सक्ने सामन्तहरूलाई ढाल्नका लागि एक महासामन्तले २०२१ को भूमिसुधार ल्यायो । आखिर ए क्लास राणाहरू, विशेष गरी चन्द्रशमशेरका सन्तानजस्ता आफूलाई नगन्ने बलिया सामन्तहरूलाई ढाल्न तिनका दरबारहरू राष्ट्रियकरण गरेको अर्को घटना यसका निम्ति यहाँ पर्याप्त छ । यद्यपि अर्थतन्त्रका आँखामा यसले राष्ट्रिय उत्पादनलाई पूरै घटाएर नेपाललाई पराश्रित बनाइदियो । र, कम्युनिस्ट आधारलाई बलियो बनायो । फलस्वरूप ‘कांग्रेस जन्माउने त्रिभुवन, कम्युनिस्ट जन्माउने महेन्द्र’ भन्ने उक्ति बन्न पुग्यो । कांग्रेस र इन्डियाले महेन्द्रलाई निरन्तर तारो बनाइरहने कारण यही देखिन्छ, भूमिसुधार र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग । तर, भोटको राजनीति मात्रै बुझेको कांग्रेसले लोकप्रिय हुनका लागि हाम्रो विचार महेन्द्रले लिए भनिरहँदा कोइरालामै समाजवाद कहाँनिर कम्युनिज्म हुन पुग्छ भन्ने हेक्कै नरहेको देखिन्छ । त्यसैमा अन्योल देखिन्छ । यो शब्द झिक्दा समाजवादको परिभाषा हुन्छ र राख्दा कम्युनिज्मको परिभाषा हुन्छ भनिदिएर मात्रै भएन, व्यावहारिक रूपले बुझाइको स्पष्टता देखाउँदैन । असीमित जमिन भएको इन्डियामा जयप्रकाश नारायणले चलाएको भूदान आन्दोलनको कपी परोक्ष रूपमा अन्ततः कुण्ठाले ग्रस्त कम्युनिज्मको उत्पादन हुन गयो भन्ने कांग्रेसले बुझेको आज पनि देखिँदैन ।
‘महामानव’ होइनन् कोइराला भनेर स्वयं उनका जेठा छोराले सुरुचि साप्ताहिकमा भनेपछि ‘उम्किएको माछो ठूलो’ ठान्ने धेरै रोगीहरू ठीक ठाउँमा आए । किनभने यो नेपाली समाज हो । त्यही साप्ताहिकका सम्पादकले पहिलोपल्ट स्वरसम्राट् भनेका हुन्, जसलाई पछि नारायणगोपाल स्वयंले अस्वीकार गरे । (आजका दिनमा सत्यमोहन जोशीलाई शताब्दी पुरुष भनिँदै छ । जोशीको नेतृत्वमा लेखिएको ‘कर्णाली लोकसंस्कृति’ को स्तरमा अरू कुनै कृति लेखिएन भन्नैपर्ने हुन्छ । उनले चलाएका प्रज्ञाका महोत्सवहरूले सिर्जना प्रतिस्पर्धाले हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापना गरेको सत्यलाई स्विकार्नु पनि पर्छ । मोहन कोइरालाका ठाउँमा उनलाई उति बेलै कुलपति बनाइदिनुपर्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ । उनलाई केही उपाधि दिनुपर्थ्यो भन्ने र राम्रो भयो भन्ने पनि छ । तर, गहिरिएर सोच्न पुग्यो भने यो ‘शताब्दी पुरुष’ भन्ने संज्ञाको संयोजनले उनलाई उडाएको हो कि सम्मान गरेको हो, पत्तो पाउनै गाह्रो छ ।)
थापाथली दरबार, सेतो दरबार र सिंहदरबार तीनवटैले आ–आफ्ना रोलवाला र बेरोलवालाहरूको समेत गुप्तचरी गरेको जगजाहेर छ । आजकै मितिमा पनि सबै प्रमुख नेताहरूले आफ्ना र प्रतिद्वन्द्वी पार्टीका नेताहरूको गुप्तचरीमा मानिसहरू तैनाथ गरेको कुरा पनि एक खुला रहस्य हो । माथि भनियो, प्रधानमन्त्री बन्लान् भन्ने डरले उपाध्यायलाई दुई ठाउँबाट हराउनलाई आफूले पनि गोप्य सूचना जम्मा नगरी सम्भवै थिएन । यसैले पछिल्ला कृतिहरूमा आफूलाई सक्रिय राजनीतिबाट पाखा लगाइदिने पात्रहरूविरुद्ध प्रयोग गरिएका शब्दहरूले ‘सुम्निमा’ को त्यो शालीन र सौम्य भाषा पनि उनै कोइरालाको हो ? भन्ने प्रश्न उठाइदिन्छ । ‘पलिटिकल स्पोट्सम्यानसिप’ भन्ने अंग्रेजी शब्दहरू हामी थेगोजस्तै प्रयोग गरिरहन्छौं, त्योसम्म पनि उनमा रहेछ त ? भनेर सोच्न बाध्य भइन्छ ।
१७ हजार मर्न पुगेको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा कोतपर्वको घटना अत्यन्त सामान्य हुन गयो । सर्वशक्तिमान वीरेन्द्रको परिवार–विनाशले भीमसेन थापाको आत्महत्या, रणोद्दीपको हत्या र मदन भण्डारीका दुर्घटनाजस्ता यथार्थहरू गल्ली अखबारका पुच्छ्रे पंक्तिहरूजस्ता भए ।
यसै गरी गैरनिर्वाचित पात्रले संविधानसभामा राखेका प्रस्ताव; हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नोस्, हुँदैन भन्नेले हुँदैन भन्नोस् भन्दै गोप्य मतदान नगराई, हात गन्तीसमेत नगरी पास हुँदै गरेका संसदीय निर्णयहरूले १ पुस २०१७ को घटनालाई अनकन्टारमा छोडिदिइसके । अब यो घटना चर्चायोग्य वाक्य नै पनि रहेन । तर, हरेक १ पुस कसैलाई महान् र कसैलाई भयानक खराब देखाउने एउटा राष्ट्रिय कुस्ती आयोजना पर्वका रूपमा प्रायोजित हुँदै आएको छ । र, त्यसै गरी पसारो पर्नेछ ।
उपत्यकाका सुनका गजुरहरू देखेर मोहित भएकाले त्यहाँ हमला गर्न पुगेको हो भन्ने आरोप पृथ्वीनारायण शाहमाथि लाग्दै आएको छ । तर, आफ्नो उपदेशको एक ठाउँ उनले उपत्यकालाई भनेका छन्– ‘सानोतिनो खेलखाल हुने चिसो ढुंगो रहेछ ।’ २०४० को दशकसम्म पनि देवीदत्त शर्माको ‘होटल इडन’ को कौसीबाट त्यो कथित फ्रिक स्ट्रिटवरिपरि काँचो इँटका गारोमाथि छ्वालीका छानाहरू देखिन्थे, नौतले दरबारको नाकै तल । दरबारी सरदार हंसमानको घरको ठेगाना थियो— खि ढलः (अर्थात् पाइखाने ढल बग्ने ठाउँ), धरहराकै मुनि । त्यो भयानक फोहोर, पछौटे र कलेराको रोगी, शौचालय नै नभएका भिक्टोरियन दरबारहरू, एकले अर्काको कपालको जुम्रा हेरिरहेका महिलाहरूको ताँतीले भरिएको राजधानी सहरको ‘राजनीति’ चाहिँ ‘सुप्रिम’ स्तरको थियो भनेर ठान्न सकिँदैन पनि । पहिलो प्रधानमन्त्री दामोदर पाँडे (अरूले भीमसेन नै मानून्) देखि आजभोलिसम्म आइपुग्दा पनि त्यो सुप्रिम स्तरको छैन पनि । पृथ्वीनारायण शाहको आकलनले भन्छ– यो कुनै देशको केन्द्र बन्नलायक स्तरकै ठाउँ होइन । यसैले बरु नुवाकोट सही, उच्च स्थानमा आसन जमाउने प्रयत्नमा थिए उनी । र, सायद उनी धेरै सही थिए । भ्यागुतोले भरिएको कुवाको पानी धोकेर विगतमा बाँच्ने युग हुन्छ कतै ? विगतमा बाँचेका मानिसहरूको देश त भूतहरूको देश हुन्छ । मृतहरूले युगको वहन गर्दैनन्, तिनबाट युगको वहन गरेर गरिँदैन ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७७ ०९:२८